एक घण्टा जहाज कुराएको भन्दै यात्रुहरुद्वारा मन्त्री योगेश र्‍याखर्‍याख्ति - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एक घण्टा जहाज कुराएको भन्दै यात्रुहरुद्वारा मन्त्री योगेश र्‍याखर्‍याख्ति
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईमाथि विमानभित्रै केही युवाहरुले गालीगलौज गरेका छन् । नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट काठमाडौंका लागि उड्नै लागेको बुद्ध एयरको जहाजका यात्रुहरुले मन्त्री भट्टराई विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। मन्त्रीलाई गाली गरेको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर ‘हटकेक’ बनिरहेको छ ।
मन्त्रीले आफ्नो व्यक्तीगत प्रायोजनका लागि उडान होल्ड गरेको र सोहीकारण एक घण्टा ढिला भएको भन्दै यात्रुहरुले मन्त्री विरुद्ध जहाजमै नाराबाजी गरेका हुन्। यता मन्त्री भट्टराईले भने विमान चढ्न ढीलो भएकोमा क्षमा मागेका छन् ।
भिडियोमा के छ ?
युट्युबमा राजावादीका रुपमा चर्चा कमाएका ज्ञानेन्द्र शाहीको टोलीले बुद्ध एयरको प्लेनभित्र मन्त्री भट्टराईलाई थर्काउँदै भिडियो खिचेको बताइएको छ । काठमाडौं आउने विमानलाई मन्त्रीले एक घण्टासम्म कुराएर यात्रुलाई सास्ती दिएको भन्दै शाहीको टोलीले मन्त्रीमाथि हप्कीदप्की गरेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
उक्त भिडिओमा निकै आक्रोशित देखिएका यात्रुहरुले मन्त्रीसँग सवाल पनि गरेका छन्। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम गरेर नेपालगञ्जबाट काठमाडौं फर्कन लागेको ज्ञानेन्द्र शाहीको टोलीले विमानभित्र र बाहिरसमेत मन्त्री भट्टराईलाई थर्काएको भिडियोमा देखिन्छ । जसलाई शाहीले ‘मन्त्रीलाई रामधुलाई गरिएको’ भनेका छन् ।
शाही र उनको टोलीले विमानभित्र मन्त्री भट्टराईलाई हप्काउँदै भनेका छन् –
‘तपाईले हाम्रो प्लेन किन रोकेको ? एक घण्टासम्म प्लेन रोक्ने ? तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? मोजमस्तीमा हुनुहुन्थ्यो कि केमा हुनुहुन्थ्यो ? ख्याल राख्नुपर्दैन टाइमको ? संविधान तपाईले बनाएको, संविधानको कुन सेक्सनमा लेख्या छ मन्त्रीले प्लेन रोक्ने भनेर ? कहिले प्रधानमन्त्री आउने प्लेन २ घण्टा जाम गर्दिने, यसको जवाफ दिनोस् । हामी रेक्सपेक्ट गर्छौं, तर यो तरिका भएन मन्त्रीज्यू, बुद्धिमा अलिकति बिर्को आओस् ।.. पञ्चायतमा यस्तो हुँदैनथ्यो । संकृति मन्त्री हुनुहुन्छ, संस्कारै छैन । हामीले जवाफ माग्यौं, मन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुभएन, हामी फेरि पनि सोसियल मिडियामार्फत् जवाफ खोज्नेछौं, तर हामी छोड्दैनौं ।’
हामी तपाईलाई सम्मान गर्छौं भन्दै मन्त्रीलाई थर्काएपछि शाहीले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘मन्त्री योगेश भटराईलाई आज नेपालगञ्ज एअरपोर्टमा रामधुलाई गरियो । मन्त्री योगेश भट्टराईले आज नेपालगञ्ज एअरपोर्टमा १ घन्टा प्लेन कुराएपछि हामी नागरिकले रामधुलाई गरियो । विचरा मन्त्रीज्यु मुसो लुकेजसरी लुक्नु भो । अब नागरिक सचेत भैसके । अरिङगालका दिनगन्ती शुरु ।’
एक घण्टा होइन पन्ध्र मिनेट ढिलो भएको हो !
पर्यटन मन्त्री भट्टराई शनिबार डल्फिन महोत्सवको उदघाटन गर्न धनगढी हुँदै बाँके पुगेका थिए । कार्यक्रम सकेपछि शनिबार साँझ उनी नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट बुद्ध एयरमा काठमाडौं फर्किएका छन् । बुद्ध एयरको जहाज नेपालगञ्जबाट ६:२५ मा उड्ने तालिका थियो।
कार्यक्रम सकेर नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आइपुग्दा प्लेन छुट्ने समय केही ढिलो भएको थियो । तर, एक घण्टासम्म नभई १५ मिनेटमात्र ढिलो भएको मन्त्री भट्टराईका स्वकीय सचिव प्रेम गुरागाईको दाबी छ । गुरागाईले भने, ‘हामी बाटोमा आउँदा राजमार्गमा गाईवस्तुले बाटो छेकेका कारण केही ढीलो भयो ।
‘त्यहाँ ज्ञानेन्द्र शाही र उनका सहयोगीहरु भिडियो खिच्न तयार भएर बसेका रहेछन्, हामीलाई किन कुराएको भन्दै मन्त्रीज्युलाई गालीगलौज गरे,’ गुरागाईले भने, ‘मन्त्रीज्यूले त्यहाँ कुनै प्रतिक्रिया नदिई मौन बस्नुभयो ।’
उक्त जहाजमा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरुले पनि मन्त्रीका कारण एक घण्टा बढी ढिला भएको बताएका छन्।
‘मन्त्रीका कारण उडान १ घण्टा ७ मिनेट ढिलाएको हो’ उक्त उडानमै रहेका यात्रु अविश अधिकारीले भने। बाहिर सार्वजनिक भएको भिडिओ पनि आफैले खिचेको उनले दाबी गरेका छन्।
मन्त्री योगेश भट्टराइ का कारण नेपालगन्जमा बुद्द एयरको जहाज एक घण्टा ढिलो भएको कारण अन्य यात्री योगेश प्रति यसरी आक्रोशित भएका थिए आज ।
9:43 PM – Sep 14, 2019 · Nepal
मन्त्री भट्टराई भन्छन्- क्षमाप्रार्थी छु
मन्त्री भट्टाराईले फेसबुकमार्फत् आफ्ना विरुद्ध नियोजित रुपमा उत्रिने केही व्यक्तीका कारण यो सब भएको तर जहाज भने जम्मा १५ मिनेट ढिला भएको बताएका छन्।
मन्त्री भट्टराईको प्रतिक्रिया यस्तो छ-
आज कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा आयोजना भएको डलफीन महोत्सबको कार्यक्रम सकेर बुद्ध एयरको धनगढीको अन्तिम उडानबाट काठमान्डौ र्फकने मेरो योजना रहेको थियो । तर, कार्यक्रम ढिला भएका कारण बुद्ध एयरसँग अनुरोध गरेर नेपालगञ्जको अन्तिम उडानबाट काठमाडौं र्फकने क्रममा केही ढिला हुन गएको सत्य हो ।
सबै यात्रुको बोर्डिङ भएको करिब १५ मिनेटमा हाम्रो टिमको बोर्डिङ भएको हो । भोलि प्रतिनिधिसभामा माननीयहरुको प्रश्नको मैले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेका कारण काठमाडाै र्फकनैपर्ने दबावमा म थिएँ । नेपालगञ्ज विमानस्थलमा ३/४ जना व्यक्तिहरु आक्रामक शैलीमा मेराविरुद्ध प्रस्तुत हुनुभयो । एकजनाले पारसका विरुद्ध सात लाख हस्ताक्षर दरबारमा बुझाएर तैंले हामीलाई कति दुःख दिएको छस् ? त्यो हामीले कहाँ बिर्सेंका छौ र ? सम्म भने । त्यो सुनेपछि उनीहरुको नियत मैले बुझिहालें । सम्पूर्ण यात्रु तथा बुद्ध एयरले देखाएको समझदारीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’
मेरा कारणले यात्रुहरुमा पर्न गएको असुविधाप्रति भने क्षमाप्रार्थी छु ।
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरस्थित सुदूरपश्...
पर्वत । पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा सञ्चालित निःशु...
तीनकुने बस्दै आएकी सरस्वती खड्कालाई केही समय प...
सुर्खेत । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शान्ति र स्थ...